Emashumini ambalwa eminyaka adlule, ama-T-shirt ayebhekwa njengelineni, elaligqoke ngaphansi kwezingubo futhi kwakungahlosiwe ukuba agqoke njengengxenye emele yengubo yokugqoka. Isimo sashintsha abadlali abaqala ukugqoka ama-T-shirts njengengxenye yefomu lezemidlalo. Ngakho igama lahamba-T-shirts.
Imibhalo yokuqala yokuqala yamatekisi yabonakala phakathi kwabagijimi namasosha: abanye babhala inombolo eqenjini, abanye babhala iqembu legazi. Kamuva, ezikhathini zama-hippies ne-disco, abantu abasha babhala ngezembatho zabo izingqikithi ezahlukene: ngokumelene nempi, ukukhululwa kwabesifazane, imishwana ehambisana nomzuzu wezombangazwe. Ngesikhathi esifanayo kwakukhona ama-T-shirts ngemidwebo ehlekisayo, ngoba ezinye izinkulumo zazingokwemvelo.
Ama-t-shirts anezithombe namathekisthi kancane kancane abe yinto ejwayelekile yezingubo zansuku zonke. Futhi namuhla izinto ezinjalo zikhona esigqebeni sabantu bonke - indoda, owesifazane noma ingane.
Ama-T-Shirts Amakhosikazi Asemfashini
Ama-shirts abhalwe phansi bathanda kakhulu ukugqoka amantombazane amancane namantombazane asebasha. Ngokuvamile lokhu kungamazwi ngesiNgisi: "SPORTS", "FASHION", "COOL" nokunye okunjalo. Kukhona futhi ukulingisa imikhiqizo eyaziwayo, ngakho-ke ama-T-shirts ungabona imibhalo ethi "i-Dolce Gabbana", "Prada", "uCalvin Klein", njll. Kunezikhombisi ezimbili eziyinhloko zezinto ezinjalo: imidlalo yamaLonic kanye nama-T-shirts nama-rhinestones nama-pawns. Okukhethwa kuqala akuyona into emangazayo: izingubo ezinjalo zingacatshangwa nsuku zonke, zenzelwe ukuhamba kwangaphandle, ukuzijabulisa kwangaphandle noma imidlalo yangaphandle. Lapha nje udinga ukukhetha umbala kanye nesitayela esifanele.
Ama-t-shirts ngama-crystals angabheka njenge-vulgar, futhi ayikho imingcele ethile yokubala into enjalo. I-T-shirt, ehlotshiswe ngokugcwele namafihlekile, ingaba isitayela, naphezu kokuningi kokuhlobisa. Ihembe elinesibalo esincane se-glitter nokuqoshwa okuqondakalayo kungase kubonakale eshibhile ngenxa yombala noma ilungiselelo elibi lezimhlobiso. Ngakho udinga ukuncika ekuthandeni kwakho.
Ingozi enkulu futhi ukungazi ulimi lwesiNgisi: ngekhanda lomfazi omuhle kakhulu amagama angcolile angabhalwa, ngakho-ke uma uthenga izinto ezinjalo kufanele okungenani ube kude ukuze ucabange ukuthi babhalisiwe.
Ama-t-shirts ngemibhalo ebhaliwe
Ama-t-shirts ngamahlaya nezithombe ezihlekisayo zithandwa kakhulu. Zamukelwa ukunikeza abangani mayelana nangaphandle, beka amaqembu obhiya, ngesikhathi sokuphumula noma ukuxhumana okungavumelekile. Yini engabhalwa ezintweni ezinjalo? Nazi izinketho ezimbalwa:
"Indoda yangempela idla inyama!"
"Inkosi, nje inkosi."
"Intombazane yami ineminyaka engu-16, kodwa nginesibhamu."
- "Ngibukeka njengomuntu othandekayo."
"Angifuni izindlela ezilula. Nginevila kakhulu. "
- "Kuningi abanesibindi, bambalwa abanesibindi."
"Ngithanda ubhiya nomkami."
Kunezinketho eziningi, futhi uma ungathandanga noma yikuphi okuhlongozwayo, ungahle ulandele i-T-shirt ngokubhalwe okuthile. Emasitolo okukhumbuza kunomsebenzi wokunyathelisa amathekisthi nezithombe ku-T-shirts, ama-mugs nezifundo ezihlukahlukene.
T-shirts zamadoda: ezemidlalo nezimoto
Ama-t-shirts ngokubhaliswa kwamadoda ngokuvamile avame ukuhlukahluka kwezindaba zezemidlalo nezimboni. Lezi zibizwa ngokuthi ama-T-shirts ezivela emakethe awaziwa ngamagogi ahlonishwayo, namakhohlisi ase-Chinese-Vietnamese ngaphansi kwemikhiqizo efanayo, nama-T-shirt anebheji yemoto ayithandayo noma imoto yephupho. Esikhathini esithile, ungathatha ama-shirts ezemidlalo amaqembu ahlukene wezemidlalo: ezweni lakithi iHockey eyaziwa kakhulu, ngakho-ke ama-T-shirts abhala izinombolo namagama abadlali abadumile be-hockey.
Okunye okufanele ukushiwo yizingubo ezibhalwe phansi kanye nemidwebo yamaqembu ayizintandokazi zegwala, isibonelo, "Aria", "Metallica", "Nirvana", "Red Hot Chili Peppers", njll. Awukwazi ukubiza izinto ezinjengamadoda kuphela, amantombazane amaningi ngenjabulo Zithenge ngokwabo T-shirts ngezimpawu zabadlali abathandayo.
Ama-T-shirts wamadoda ngokubhaliswa kwezemidlalo nezihloko zezimoto kuvame ukunikezwa amadoda ngoFebhuwari 23, okungenani kakhulu kaningi kunamajezi namahlaya. Ukuze uthathe isipho ngamahlaya, udinga ukwazi umuntu kahle kakhulu, kodwa izimoto nemikhiqizo yezemidlalo edume njengabo bonke abantu.
Ama-t-shirts abhalwe phansi ngesizathu esithile
I-T-shirt enombhalo ingenziwa ukuba ihleleke, kanti umthengi uqobo ngokwakhe unquma ikhwalithi yento eyisisekelo, kanye nendlela yokusebenzisa izincwadi. Izinto ezingabizi kakhulu kuzo ukunyathelisa kwendwangu, kubheka futhi eshibhile. Noma kunjalo kungenzeka ukuhleleka ukuhlobisa umbhalo odingekayo, maduzane le ndlela iba ethandwa kakhulu. Amantombazane angahle ahlele imidwebo ngezingubo zokugqoka kanye ne-pawns.
Amatekisi anezinhlawulo angalawulwa ngezizathu ezahlukene. Omunye wemithetho evamile kakhulu ukuthuthukiswa komdwebo ngamunye ngabathandi. Lo mbhangqwana uthola ama-T-shirts ngokuqinisekiswa kokuthandana kokuthandana kanye nezinye iziphukuphuku ezithandekayo. Ama-shirts amantombazane abakhulelwe athandwa kakhulu - eminye imibhangqwana iyala uchungechunge lonke lolo lonke isikhathi sokubeletha ingane.
Ama-t-shirts abhalisiwe ngokuvamile avunyelwe abahlanganyeli bezingqungquthela ezahlukene, imikhosi, izinkomfa - lokhu kuyinto enhle kakhulu ukugcina imemori bese ubonisa kamuva abahlobo babo kunoma yimuphi umcimbi.
Zokubhukuda kazwelonke izizwe zomhlaba
Izindwangu zamakhosikazi - ngobuhle, ngokufudumele, ngobumnene
Running on the spot ukunciphisa umzimba ekhaya: mangaki ama-calories ungafaka?
Indlela ukulungiselela salads ekubalekeni nge crackers?
Ukugqoka of lace - hit isizini
Ukuthuthwa kwamanzi okuzimela - izinzuzo nezinhlobonhlobo